Does Zimbabwe Currency Have Any Value? - Врач24/7 Онлайн
Can you still exchange Zimbabwe dollars?
Poverty and unemployment are both endemic in Zimbabwe, driven by the shrinking economy and hyper-inflation.
The negative economic environment since the year 2000 has also impacted Zimbabwean entrepreneurs with a large number of them going bankrupt between 2000 and 2014..
Convert Zimbabwean Dollar to US DollarZWDUSD1 ZWD0.00276319 USD5 ZWD0.0138160 USD10 ZWD0.0276319 USD25 ZWD0.0690799 USD7 more rows•Jul 16, 2020
Zimbabwe dollarInstead, a new currency called the Zimbabwe dollar will now be the sole legal tender in the country. The Zimbabwe dollar comprises of bond notes, coins, electronic balances and the RTGS dollar.